Niato ny fizarana ary napetraka ny mason-tsivana: hisitraka ny Vatsy tsinjo ireo “tapaka asa sy tena sahirana” | NewsMada
Niato ny fizarana ary napetraka ny mason-tsivana: hisitraka ny Vatsy tsinjo ireo “tapaka asa sy tena sahirana”
Hivaha tsy ho ela ny olana. Nanatanteraka avy hatrany ny toromariky ny filoham-pirenena ny eo anivon’ny governemanta sy ny faritra ary ny CUA. Hisy ny fandaminana vaovao ny fizarana ny fanampiana “Sosialim-bahoaka”.
« Atsahatra aloha ny fizarana ny Vatsy tsinjo fa hisy ny fanadihadiana eny ifotony ho an’ireo tena tokony hisitraka izany. Ny 11 aogotsitra indray vao hozaraina izany », hoy izy ireo tetsy Ampefiloha, omaly. Nofaritana tamin’izany ny mason-tsivana ka anisan’ny hisitraka izany ireo tsy anasa na koa ireo tapaka asa sy tena sahirana. Eo koa ireo tsy manan-koraisina. Nohitsin’ireto tompon’andraikitra ireto fa tsy azo ekena ny kiantranoantrano sy ny fiangarana na koa ny fitanilana amin’ny fizarana ny fanampiana. « Antony nahatonga ny fandaminana vaovao izany sady ho ao anatin’ny mangarahara. Miandry ny lisitra izy. Hapetraka avy eo ny rafitra ahafahan’ireo olona mitaraina ka tena hotsinjovina ireo tena marefo », hoy izy ireo.
Nambaran’izy ireo fa ilaina koa ny fahatsapan-tena sy ny fihavanana ka mifampitsinjo. Mba ireo tena mila ny fanampiana no hisitraka izany. Anisan’ny hanaovana ny hetsika ireo renivohi-paritany enina, miampy ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana, i Moramanga, i Nosy-Be ary ny any Antsirabe.
« Hofantarina ireo mipetraka amin’ny trano, ny loham-pianakaviana. Havaozina koa ny karne, hampanarahina fenitra. Tsy hisy intsony hitangorona eny amin’ny biraon’ny fokontany », hoy ihany izy ireo.
Hidina ifotony koa ny mpiasan’ny minisitera, ny faritra, ny kaominina hitety tokantrano hanao ny fanisana. « Tsy tokony hisy intsony hitaraina fa tsy mahazo », hoy izy ireo.
Synèse R. sy Njaka A.